🥇 ▷ Ku rakibida WhatsApp Free aaladdaada waa sahlan tahay ✅
Ku rakibida WhatsApp Free aaladdaada waa sahlan tahay
Maalin kasta isticmaalka barnaamijka WhatsApp wey fidayaa, ma aha oo keliya inta u dhexeysa isticmaaleyaasha Android laakiin sidoo kale isticmaalayaasha macruufka. Iyada oo ay muhiimadda ay leedahay in barnaamijkani leeyahay, waa iska caadi in kumanaan dad ah ay isweydiiyaan sida loogu rakibo WhatsApp bilaashka ah aaladooda.
Ku rakib WhatsApp-ka bilaashka ah iPhone
Whatsapp waa codsi rasmi ah, oo aad ka heli karto dukaanka app Google Play Store, dadka isticmaala iPhone wey ka soo degsan karaan Whatsapp-ka App Store. Waa inaad riixdaa “hel” isla markaaba dalabka ayaa la soo dejinayaa oo lagu rakibi doonaa bartaada. Markii la soo dejistay oo la rakibay, dhagsii icon-ka WhatsApp-ka ee desktop-ka weyn ee iPhone-ka si aad u furto arjiga oo aad u aragto sida ay kuugu soo dhoweyneyso.
Ka dib riix “Aqbal oo soco” ka dibna geli lambarka taleefankaaga. Ugu dambeyntii riix “Ok.” Markaad xaqiijiso lambarka taleefanka, shaashad ayaa soo muuqan doonta halka lagaa weydiin doono koodh laguugu soo diri doono SMS, oo ay tahay inaad gasho Whatsapp. Markaa waa inaad ku qortaa magacaaga iyo masawir si ay xiriiradaadu kuu aqoonsadaan.
Ku rakib WhatsApp bilaash ah Android
Haddii ay dhacdo in maddaxda nidaamka hawlgalkaagu uu ka kooban yahay Samsung, Sony, HTC, Huawei, BQ, LG ama astaan ​​kale, waa inaad kala soo baxdid Whatsapp adiga oo adeegsanaya dukaannada dalabka ee Google Play Store.
Ka raadi Google Play barnaamijka WhatsApp ka dibna riix “rakibo” si aad ugu bilowdid soo dejinta qalabkaaga. Marka app-ka la rakibo, ka raadi icon-ka whatsapp-ka desktop-ka desktop-ka oo guji; Soo dhoweynta ayaa isla markiiba bilaabmi doonta.
Ka dib riix “Aqbal oo sii wad”, geli lambarka taleefankaaga oo taabo “Next.” Waxaad heli doontaa farriin leh koodh (nidaamyada Android si otomaatig ah ayey u aqoonsadaan). Ugu dambeyntii, sii wad inaad dhigto magacaaga iyo masawir si dadka aad la xiriirto ay kuu aqoonsadaan.